Umthandazo kwiNtombikazi yeXolo Discover ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Yenza uMama wakho konke okukhoyo nokuba umamele ilizwi lakho, umbulelo wakho kunye nemithandazo yakho kunye no umthandazo kwiNtombi Enyulu uxolo. Qhubeka ufunda eli nqaku kwaye ufumane yonke into oyifunayo.
1 Umthandazo kunye neNtombi Enyulu yoXolo
2 Umthandazo ongcwele
Umthandazo kunye neNtombi Enyulu yoXolo
Umthandazo, ngaphaya kwamagama, ngumzuzu wonxibelelwano lokomoya. Umthandazo unxibelelwano esilwakhayo kunye nokholo lwethu kwaye unxibelelana nobuthixo bezinto ezithile eziphezulu. Kuyasebenza ukucela uncedo, ukubulela kunye nokucela umntu wesithathu, yeyona ndlela ichanekileyo esinokuthetha ngayo neNgcwele, intombi okanye uThixo. Umoya wethu uphakama de siphumelele kwimo yoxolo ukuze siviwe kwaye sincedwe.
Singabantu abeza emhlabeni ukushiya ilifa, baqhubeke nelifa elashiywa nguYesu, baphakamise ilizwi leNkosi kwaye bamdumise. Kwimihla yethu kuya kufuneka sibeke okona kulungileyo kuyo yonke indima esiyidlalayo, njengabantwana, abazali, iingcali kunye nabantu ehlabathini. Ngenxa yeemeko ezininzi ezenzeka ngokuhamba kwexesha, sizifumana sineemeko ezivavanya ukholo lwethu.
Kwezo meko zinzima sifuna uncedo olungaphaya kokuqondakalayo, ngaloo maxesha kuyinto eqhelekileyo ukubhenela kwindawo enamandla kwaye sicele ukhuseleko lwabo, intsikelelo kunye nobulumko ukusinceda ukuba sizoyise. Kukho uluhlu olubanzi lwabangcwele kunye neentombi ezenza imisebenzi eyahlukeneyo kwaye zaziwa ngokwenza imimangaliso kwiindawo ezinje ngezoqoqosho, uthando, intabalala noxolo.
Ukucela uxolo kukho oothixo abaninzi abaziwayo ngenxa yamandla abo kunye nokusetyenziswa kwabo ukufezekisa ukuzola, nokuba kukwilizwe jikelele okanye ebomini, la maziko abukele impilo-ntle yamarhamente awo kwaye awancede kubo bonke ubomi bawo.
Intombi Enyulu yoxolo igubungela ngengubo yakhe ihlwempu, lowo unesibindi sokuzikhulula phambi kwakhe kwaye acele ubukho bakhe obungcwele. Le Ntombikazi yasezulwini ibakhathalele njengomama abo bayikholwayo kwaye ibakhokele kwindlela yokufumana ukuzola, ubukrelekrele nothando kubomi babo okanye kwindalo esingqongileyo. Unokuba nomdla Umthandazo wokudambisa umyeni.
Emva kokuhlalutya kancinci, siya kwenza ifayile ye- umthandazo weNtombikazi yeXolo Yiyo ke loo nto ucela iNtombikazi enkulu ukuba isithandazele thina kunye nabantu esibathandayo:
UMariya, uMama kaThixo,
Umama wam, uKumkanikazi woXolo,
Cela uNyana wakho uYesu andiphe isipho soXolo.
uxolo entliziyweni yam,
uxolo lwengqondo nomphefumlo,
uxolo kusapho lwam,
Uxolo nabo bonke
endiyifumana endleleni yam,
Yesu, Nkosi yam noMsindisi,
Ndiza kuwe noMariya,
ukukucela ngokuthobekileyo isipho soxolo.
Thela uMoya oyiNgcwele woxolo kum.
Ndiphe uxolo, Yesu;
uxolo ngaphakathi kwam
uxolo yonke imihla yobomi bam.
Nika uxolo kwilizwe lam nakwizizwe zonke.
Uxolo kubo bonke; uxolo kwi el mundo.
Yesu, mlamli wam kunye noBawo,
ndise kuBawo ndiyokuthandazela uxolo.
Bawo, Bawo kaYesu, Bawo wethu, Bawo,
Ndiza kuwe noNyana wakho uYesu.
Kuye, kunye naYe,
kwaye ngaye ndicela uxolo.
Akusiyo imfihlo ukuba ukuhamba kwexesha kuyenzile imeko-bume enogonyamelo, neemfazwe, izifo, iingxaki zoqoqosho kunye nokungekho sikweni okuchaphazela izizwe kwihlabathi liphela. Uxolo kunzima ngakumbi ukulufumana yonke imihla, kodwa siyitempile kaThixo, ke sikwanendawo yokumisa phambi kokuxakeka kwaye siphakamise ilizwi lethu ukucela uncedo okanye ukukhanyiselwa umthandazo kwiNtombi Enyulu yoXolo.
Yintoni uxolo? Yintoni esenza sizive sinoxolo? Le yimibuzo ngaxa lithile ebomini esinokuthi siyibuze, abantu abaninzi bacela uxolo, kodwa ngaba bayayakha imeko yoxolo? Ngaba uyasebenzisana nendalo esingqongileyo ukuze ibe yindawo enobuhlobo nothando? Kukho amaxesha apho uxolo luxhomekeke kuthi kwaye isenzo esincinci sinokusinceda sifumane olo xolo silulindeleyo.
Uxolo lunokubonwa njengolo luvakalelo lokugqibelela kunye nokuzola okupheleleyo esinokukufumana ngokungathwali naluphi na uxinzelelo lweemvakalelo okanye lokomoya. Ndiziva ndikhululekile kwaye ndiyazi ukuba izinto zenziwa kakuhle, ukuba akukho matyala, amaxhala kwaye yonke into ilungile, uxolo lunokuba kukuwola kukamama, amazwi katata, ukwanga kwesibini okanye nje ukuba uyazi ukuba uphila olunye usuku uphefumla.
Ukubulela ngoxolo kubalulekile, ukwazi ukuba ungayixabisa njani loo mizuzu yeyona nto isenza ukuba sifune ukuyonwabela ngakumbi, qhubeka. Kude ebubini, ebumnyameni nakwiindlela ezizisa ukungonwabi, usizi kunye nokuphanziswa, nokuba sizishiya ezi zinto, sinokulufumana uxolo olupheleleyo noluzeleyo.
Singaba ngabathwali boxolo, sabelane nehlabathi ngolonwabo oluziswa kukuzola. Inkqubo ye- umthandazo weNtombikazi yeXolo Isinceda ukuba sicoce iintliziyo zethu, iingqondo zethu, imiphefumlo yethu kunye nabantu esibathandayo kwezo ngcinga zingcolisayo zibangela ukukhathazeka kunye nosizi, isikhokelela kwindlela yokuzaliseka nothando.
Kubalulekile ukuba wazi ukuba iintliziyo zethu, umoya neemvakalelo zethu zidityanisiwe kule nto umthandazo kwiNtombi Enyulu yoXolo Kwaye olu nxibelelwano lolona lubangela ukufundwa kwalo mthandazo kubaluleke ngakumbi, kuba iNtombikazi ayiboni umzimba wethu, uziva umphefumlo wethu, iimvakalelo zethu kunye neenjongo zethu. Nciphisa olo xinzelelo kwaye usikhanyisele indlela yokuba siqhubeke nokwakha olona hlobo lwethu luhle, olungapheliyo, olomeleleyo noluthatha isigqibo. Umntu onoxolo nesiqu sakhe kwaye abelana ngaso kwabo basondeleyo kuye.
Emva kokwenza i umthandazo weNtombikazi yeXolo Kuyimfuneko ukuthi sixhenxe ooMariya, uBawo Wethu nozuko kuYise, kulandele umzuzu wokucingisisa kunye nokuzivavanya ngokwakho ukufumanisa ukuba kufuneka sibe seluxolweni.